Chete hafu yemakambani eSpain ane komiti yavo yepamusoro inobatanidzwa mukuita digitization | ECommerce nhau
Iwo mamaneja epamusoro emakambani eSpain haanyatso kubatanidzwa mumaitiro e digitization emakambani. Muchokwadi, chete 51% yavo vanogadzirisa dambudziko iri nehutungamiriri hwedare ravo rinotungamira. Nekudaro, maneja weHR vanotora chikamu muchiitiko ichi asi iine chikamu chechipiri Idzi ndidzo mhedzisiro huru dzeBarometer yeTarenda uye Dhijitari Tsika yakatangwa nhasi neiyo yepamusoro Sisitimu yeInternet Development ISDI.
Chidzidzo ichi chakapihwa panguva yemusangano wedigital wakaunza pamwechete vanopfuura zana mamaneja eHR nhasi muMadrid kuti vakurukure "Basa reMutungamiriri weHuman Resources mushanduko yedhijitari". Panguva yemusangano, nyaya senge tarenda manejimendi mukukura digitization maitiro emakambani eSpain uye "Chizvarwa C" (vashandi vasina kubatana), pamwe nemafomura e tora masangano anokwikwidza kubatanidza kufambira mberi kwetekinoroji uye nyowani mhando dzemabhizimusi edhijitari.
Kubatanidzwa kwevatungamiriri vayo uye kukosha kwedhipatimendi reHR mukuita uku ndiko kunetsekana kwakanangana nemakambani eSpain mukuita kwavo kuita digitization. Kunyangwe izvi zviri kukura, avo vanoona nezveHuman Resources mumakambani vanoda kurairidzwa kwakawanda uye kugadzirwa kwetsika yakabatana nehunyanzvi kuti vabudirire kugadzirisa shanduko iyi. Idzi ndidzo mhedzisiro huru dzeBarometer yekutanga yeTarenda uye Dhijitari Tsika mumakambani eSpanish, akagadzirwa uye akaunzwa nhasi neISDI.
1 Mhedziso yeiyo yekutanga edition yeTarenda uye Dhijitari Tsika Barometer
1.1 Kugadzirwa kwetsika yedhijitari
1.2 Bhizinesi digitization maitiro
Mhedziso yeiyo yekutanga edition yeTarenda uye Dhijitari Tsika Barometer
Mhedziso yeiyo yekutanga edition ye Tarenda uye Dhijitari Tsika Barometer Ndizvo zvinotevera:
Kugadzirwa kwetsika yedhijitari
Kugadzirwa kwetsika yedhijitari ndeimwe yematambudziko makuru ayo makambani anofanirwa kugadzirisa zvese mukugadzira kwavo uye nemidziyo inodiwa mukusimudzira kwavo:
Nezve maitiro, avo vane basa reHR vanofunga kuti digitization inoda kuvapo kwetsika yedhijitari mumakambani tsika, hutungamiriri hwakajeka mukati mehutungamiriri hwesangano nemaitiro anovimbisa kukura kwayo. Iwo zvibodzwa zvakawanikwa nemitatu mifananidzano haapfuure zvakatenderwa: chakanyanya kusashanda irwo hutungamiriri, mapoinzi mapfumbamwe pazasi peakatenderwa.
Nezve maturusi akakosha ekuvandudza dhijitari mumasangano, nyanzvi dzinoratidzira zvinhu zvina zvakakosha: kushambadzira mushandirwi, manejimendi, kudzidziswa uye kusimudzira uye kusarudza. Zvinoenderana nezvakabuda muBarometer, hapana kana chimwe chazvo chinosvika pane chakabvumidzwa; chinzvimbo chakanakisa manejimendi, mapoinzi matanhatu pazasi peakatenderwa; iyo iri kure kure, kuumbwa, kusvika pamapoinzi gumi pazasi.
Chete 48% yemakambani ndeyekuvandudza-kutungamira.
Bhizinesi digitization maitiro
Munzvimbo ino, iyo data inonongedzera kune anotevera:
81,20% emakambani akanyudzwa mune zvakadzama kana zvishoma kudzika kwema digitization maitiro uye pakati peavo vasati vatanga, vazhinji (82,6%) vanotenda kuti zvaizodikanwa, kunyanya zvine chekuita nechiratidzo chiratidzo chirongwa (22,6%)
Digitization irikuitika kupi? Mune mapurojekiti echiratidzo (51,5%), mune mamodheru emaneja (44,1%) uye muhunyanzvi uye masystem (33,8%). Nekudaro, kushambadzira uye nzira dzekutengesa dzinoitirwa kune zvishoma (31,6%) uye kuvhurwa kweInternet seyatsva yekutengesa chiteshi (16,2%)
Digitization chirongwa chevazhinji manejimendi mu43,4% yezviitiko, kunyangwe Kushambadzira (26,5%) uye MaSystem neTechnologies (22,8%) zvakare ari mavambo emapurojekiti mazhinji; Pakazara, chete makumi mashanu neshanu muzana emakambani ane mamaneja avo makuru anobatanidzwa mukuita kwema digitization.
Nezve kuitwa, matafura akashandurwa uye uyo anotungamira idhipatimendi reSystem and Technology (30,9%) pamwe nebazi rezveKushambadzira (26,5%). Iwo manejimendi manejimendi anotarisa hafu yemaitiro ainoita: 23,5%
Muna 75,27% yezvakaitwa, timu yeHR yakabatanidzwa asi haitore danho kana kutungamira chirongwa
Chete 48% yemakambani ndeyekuvandudza-kutungamira
Nezve tarenda, inopfuura hafu yenguva (53,2%) maitiro ekuita digitization anokurudzirwa netarenda remukati, asi zvakare zvinomira pachena kuti 35,1% inoshandira mupi wekunze. Nekudaro, mitsva mitsva inoshandiswa chete mu11,7% yemapurojekiti.
Nacho de Pinedo, CEO weIDDI, anotsanangura izvozvo "Mhedzisiro yeBarometer inoratidza zvakajeka mamiriro ari kusangana nemakambani ekuSpain mukuita kwavo digitization: pane kunetsekana kuri kukura uye maitiro mazhinji ari kutangwa, asi muzviitiko zvakawanda vanamuzvinabhizimusi nemaneja vari kuita zvisirizvo kunyangwe vachishaya nzira. Ini ndinofunga kune kuverengwa kuviri kweizvi: kune rumwe rutivi, ndinofunga zvakanaka kwazvo kuti kudiwa kwekunzwisisa mikana pamwe nematambudziko anounzwa neInternet ari kukanganisa makambani; kune rimwe divi, zvichipiwa degree reshanduko yeNetwork, zvakakosha kuti vatungamiriri vemakambani vatore matomu eichi chiitiko kwete kungochitanga chete, asi kugadzira tsika inosanganisira iyo kambani yese ine hunyanzvi uye matambudziko matsva e hupfumi hwedigital nekuti, kana husipo, panogona kusabudirira digitization nekufamba kwenguva. Muna 2020 Muna 2020, 45% yedu tine basa rine chekuita nenzvimbo yedigital uye tarenda nekudzidziswa zvichave zvakakosha kumakambani, vese vatungamiriri vavo uye nemapazi avo eHR ”.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Chete hafu yemakambani eSpain ane komiti yavo yepamusoro inobatanidzwa mukuverenga
Racc, Axa, Catalana Occidente uye Rastreator.com inotungamira dhijitari zano mune inishuwarenzi chikamu